Tulips in Thailand | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » Tulips in Thailand
Posted by shwe ni on Jan 22, 2011 in Photography, Travel | 10 comments
အဲဒါကြောင့် မြေပဒေသာ ကျွှန်းမှာ ကျူးလစ်ပင်တွေ ရောင်းနေတာ ဖြစ်မယ်။
မြေပဒေသာ ကျွှန်းက အပင်တွေက နိုင်ငံခြားနဲ့ ရပ်ဝေးတွေက လာကြတယ်။ ၀ယ်သူတွေက အိမ်မှာ အလှ စိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အိမ်ရောက်တော့ နေရာ ဒေသ မတူတော့ သေကုန်ကော…
Thai က Greenhouse နဲ.အအေးပေးပြီးစိုက်တာ ဆူး ရေ။
အပူ အအေး ထိန်း စိုက်တာလား။ သူတို့စီမှာ စိုက်ပျိုးရေး နည်းစနစ်တော့ ကောင်းတယ်နော်။ ဒီမှာ စိုက်ရင် ဒါကြောင့် မရှင်ဘဲ သေကုန်တာ ဖြစ်မယ်။ အပင်ဖိုး ကုန်တာဘဲ အဖတ်တင်တယ်။
Yes Su , I think In Myanmar we can grow Tulips in POL and Taunggyi cause Tulips Thailand are in the Northern part of Thailand . Not in BKK . The weather is more favourable to grow Tulips as Northern part has not only rainy and summer but also winter season .
ဒါနဲ့ စကားမစပ် အဲဒီ ကျူးလစ် အပင်တွေ အဲကွန်းခန်းထဲမှာ စိုက်ရင်ကော ရှင်ပါ့မလားဟင် သဘောကျလို့ စိုက်ချင်တယ်။ အဲကွန်းခန်းထဲမှာ စိုက်လို့ ရေလောင်းမြေသြဇာ ကျွှေးပြီး စိုက်လို့ရရင် စိုက်ချင်လို့.. နည်းသိရင် ပေးပါလား။
Dear Su ,
Frankly , I don’t know how to grow them to be that beautiful . However I will request those who are familiar with flowers and plants if I getachance , Sister
Dear char too lan (why you give this nick ,
this is my second time seeing tulips outside , CTL yay
ဟုတ်တယ် မမြင်ဖူးဘူး ကျူလစ်ဆိုတာကြားပဲ ကြားဖူးတာ
ချာချာ နဲ့ ယုယု ရေ အခု မြေပဒေသာ ကျွှန်းမှာ ရောင်းနေတယ် ကျူးလစ် အပင်လေးတွေ အပွင့်လေးတွေနဲ့ ရှိတယ်။ သဘောကျလို့ ၀ယ်ချင်တာ အိမ်ရောက်လို့ သေသွားမှာ စိုးလို့.. ဈေးကလည်း အသည်းခိုက်စရာ ၃သောင်းတဲ့ အပင်သေးသေး ပုပုလေးတွေ.. ဂျပန်မှာ မြင်ဘူးတာ အပင်ထွားထွားကြီးတွေ အပင် ပုပု ၁ပင်လား ၂ပင်လား ပါတယ် အိုးတအိုးတည်းဆိုတော့ နှမြောတယ်။